(မိုးမခ) ဇွန် ၆၊ ၂၀၁၈
ဆူပရီ ကုမ္မဏီကြီးက မင်းကင်းအမတ်ကို အခွင့်ရရင် အရေးယူဖို လုပ်မယ်ဆိုတော့၊ မင်းကင်းအမတ်က မှားယွင်းပြောဆိုတယ်လို့၊ သူတို့ ဖေ့ဘုတ်မှာ အတိအလင်း ရေးပါတယ်။ အာဏာရှိသူထက် ငွေရှိသူကို ပိုကြောက်နေရတဲ့ ခေတ်ဖြစ်လို့ သူ့ဖေ့ဘုတ်မှာ ၀င်မန့်တဲ့သူ တယောက်မှ မတွေ့သေးဘူး။ ထားပါတော့။ ငါးကြီးကြီး စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီး ကြော်စားဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ နှုတ်ထွက်တာနဲ့ပဲ ပြီးသွားသလို ဆိုပေမဲ့၊ အဂတိ တိုက်ဖျက်ရေးမှာ နောက်ကွယ်က လက်မဲကြီးတွေ သတိထားကြဖို့၊ ဟိုတုန်းက ဆိုးခဲ့၊ ခိုးခဲ့၊ ကံဇာတကောင်းလို့ ရခဲ့တဲ့ အထုပ်အပိုးတွေကို .. အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်က ထွက်ပြီး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာ ရင်းနှီးကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ကတော့ နည်းပညာပါတဲ့အတွက်၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ လောင်စာဆီ၊ မော်တော်ကား စတဲ့ လုပ်ငန်းများနဲ့ မတူပါဘူး။ ပြိးတော့ လူတစ်စုက လက်ဝါးအုပ်ထားကြတယ်ဆိုတဲ့အတွက် စူပရီကုမ္မဏီကို စွပ်စွဲခြင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ အပြန်အလှန် ပြောဆိုတာကို ခွင့်ပြုရပါတယ်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကို မှားယွင်း ပြောဆိုတဲ့အတွက် အခွင့်ရရင် အရေးယူဖို့ ကုမဏီဖေ့ဘုတ်မှာ ကြေငြာရဲတာလဲ ဒိကုမ္မဏီကြီးက “ပိုကြောက်စရာ” ဖြစ်လာပါတယ်။ ပွဲကတော့ ကြည့်ကောင်းမယ် လို့ ကွန်မင့် ကြပါတယ်။
အလားတူ နောက်ထပ် လွှတ်တော်မှာ မေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင်ပဲ ဖြေမှာပါပဲ။ ဒါလောက်တောင် ဈေးကြီး၊ ရေအားနဲ့ ကျောက်မီးသွေး လုပ်သင့်ပါရက်နဲ့ မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ အချိန်မှာ LNG အစား အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကနေ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဘာကြောင့် မ၀ယ်သေး သလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။ အမြောက်အများ ၀ယ်မယ် ဆိုရင် နှစ်ရှည်စာချုပ် ချုပ်ရပြီး ဈေးနှုန်းကလဲ တယူနစ် ၁၅၀ကျပ် ထက် နည်းမှာ သေချာပေါက် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ က တရုပ်ပြည်က၀ယ်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံကို လျှပ်စစ်ဖြတ်သန်း သွားမယ် ဆိုတဲ့ စာချုပ် ဒီလမှာ ချုပ်ဆိုတော့ အံ့သြမိပါတယ်။ ၃နှစ်အတွင်း နောက်ထပ် မဂါဝပ် ၃ထောင် ထုတ်လုပ်ဖို့ ရေတိုစီမံကိန်းအဖြစ် သမ္မတဦးဝင်းမြင့် ပြောတယ် ဆိုပြီး ဆွဲထည့်တယ်၊ အမှန်က သမ္မတကို သူပဲ တင်ပြလို့ သမ္မတက ပြောရတာပဲ ဖြစ်မှာပါ။ စရိတ်အသက်သာ ဆုံး နည်းလမ်းကတော့ မဟာဓါတ်အားလိုင်း ဆွဲပြီး တရုပ်၊ လာအို၊ ထိုင်း နိုင်ငံတခုခု ဆီက ၀ယ်ယူဖို့ပါ။ ဒီနည်းလမ်းက ရေတို အဖြေ ဖြစ်ပြီး၊ ရေရှည် အဖြေကတော့ ရေအား နဲ့ ကျောက်မီးသွေး ဓါတ်အား ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးဝင်းခိုင် ကတော့ မင်းကင်းလွှတ်တော် အမတ် စွပ်စွဲချက်ကို (ငွေရှင်၊ တင်ဒါမပါပဲလုပ်ခြင်း၊ ၀န်ကြီးဦးကျော်ဝင်းဇနီး ပါဝင်မှု၊ ဆူပရီကုမ္မဏီ ၃နှစ်ကြာ လေ့လာပြီးအစီရင်ခံစာ ထုတ်တာ) စတတာတွေ သူ အတတ်နိုင်ဆုံး ရှင်းပြပါတယ်။
ဆူပရီကုမ္မဏီ ၃နှစ်ကြာ လေ့လာပြီးအစီရင်ခံစာ ထုတ်တာနဲ့ ပြောရရင် ဆူပရီ ကုမ္မဏီ ဧရာမကြီး လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။ World Class - China Guadian Co.Ltd တို့လိုမျိုး မဟုတ်ဘဲ ငွေမရှိ. စီးပွားပညာသိပ်မတတ်တဲ့ ကျနော်အပါဝင်၊ အင်ဂျင်နီယာ ဖေ့ဘုတ်အုပ်စုက ဒေါက်တာဝင်းထိန်၊ ဦးထွန်းထွန်း၊ ကိုဝင်းထိန်ဦး၊ စတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ တွေတောင် F.S Feasibility Study လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ပုသိမ်မှာ ဒေသထွက်ကုန်ပြပွဲ မေ-၂၀၁၈ မှာ ပထမဆုံး လူထုပြပွဲအဖြစ် စူပရီကုမဏီကြီးက တစ်ခန်း၊ မိုက်ကယ်မိုးမြင့် MRPL က တစ်ခန်း ပေ၂၀ လောက် ကျယ်တဲ့ ပြခန်းနဲ့ ၃ရက် ရှင်းလင်းပြကြပါတယ်။ မေးတဲ့လူ မရှိလို့ ပြခန်းတာဝန်ခံတွေက ပျင်းနေကြတယ်။
အဲဒီမှာ စူပရီ ကုမ္မဏီကြီးက ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၂၅၀၀ LNG စီမံကိန်းကြီး လုပ်ဖို့အတွက် နို့တစ်စာလိုင်စင်ရထားပေမဲ့ မြေယာလျော်ကြေးပေးဖို့ တောင်သူတွေကို သိန်း ၁၀၀ တောင် မသုံးဘူး။ လူမှုရေး ကူညီမှု လုံးဝ မလုပ်ပဲ .. မီးလောင်ချိုင့် ဒေသမှာ လူမှုရေးရုံးခန်းတောင် မဖွင့်တာကို အံ့သြဘွယ် တွေ့ရပါတယ်။ ဒေသခံတွေ ကန့်ကွက်မှာ တော်တော် စိုးရိမ်ပုံရပါတယ်။
ကွန်ပြူတာထဲမှာ CCGT ကွန်ဘိုင်းဆိုင်ကယ် ဘွိုင်လာနဲ့ ဂက်စ် တာဘိုင်စနစ် Animation ကို လုပ်ပြထားပါတယ်။ တကယ်လုပ်မဲ့ ကုမ္မဏီကြီးက Gudian ဆိုတဲ့ တရုပ်အစိုးရ အများပိုင်ကုမ္မဏီကြီး ဖြစ်ပြီး၊ Animation ကလည်း သူတို့ဆောက်ပြီးသားတစ်ခုကို ဆွဲယူ၊ တင်ပြလိုက်တော့ ဘာမှ မကုန်ကျပါဘူး။ တကယ် အဲဒီ အဲနီမေးရှင်းမျိုး မြန်မာအစိုးရ Request for Quotation တင်သလို လုပ်ပေးရရင် ၂နှစ်တော့ အေးဆေး ကြာပါတယ်။ သူတို့က ၃နှစ်တောင် F.S လုပ်ခဲ့ပြီး၊ ယခုမှ ဗြုန်းဒိုင်း ၀င်လာတာ မဟုတ်ပါ လို့ သူတို့ဖေ့ဘုတ်မှ ကာကွယ်ပြောတယ်။
ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးဝင်းခိုင် ကိုယ်တိုင်လဲ ကာကွယ်ပြောရတယ်။ သူက တာဝန်အရှိဆုံး မို့လို့ သူပဲ ဆုံးဖြတ်ပါတယ် ဖြေသွားပါတယ်။ သမ္မတဦးဝင်းမြင့် မိန့်ခွန်းမှာလဲ ၃နှစ်အတွင်း ၃ဆ လျှပ်စစ်တိုးတက်အောင် လုပ်မယ် ဆိုပြီး၊ သူက တင်ပြတာကို သမ္မတကြီးက ပြောရတာ လျှပ်စစ်အကြောင်းသိပ်မသိသေးတဲ့ သမ္မတကြီးကို. ပြန်ကိုးကားသွားတာလဲ မပြောသင့်ပါဘူး။
နောက်ဆုံးတော့ ရေအား၊ ကျောက်မီးသွေးအား တွေ ကန့်ကွက်ခံရလို့ ဒီ၂နှစ်အတွင်း ဘာတခုမှ မလုပ်နိုင်ဘူး။ ရေအားက လုပ်ရင် ၈နှစ်လောက် ကြာမယ် ဆိုပြီး Wrong Information ပေးသွားပြန်ပါတယ်။ သူ့ခမြာလည်း အရင်က ဒါလောက် ပြင်းထန်တဲ့ တိုက်ခိုက်မှု မခံရဖူးဘူးလေ။ အင်တာဗျူး ဆိုတာလဲ မေးတာ မဖြေလဲရတယ်။ အခု လွှတ်တော်က ဥပဒေပြုမှု အမြင့်ဆုံးသော နိုင်ငံတော်အာဏာ တည်ရှိရာနေရာမှာ သူမဖြေလို့မရပါ။
“ ရေအားလျှပ်စစ်၊ ကျောက်မီးသွေး လျှပ်စစ် တွေ ကန့်ကွက်ခံရလို့ ”ဆိုတာ နည်းနည်းလေး ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
ပြည်သူလူထု ကန့်ကွက်တာ ဧရာမစီမံကိန်းကြီးတွေပါ။ ကုမ္မဏီတွေကလဲ လာဘ်စားမှတော့ နည်းနည်းမစားဘူး၊ တသက်စားမကုန်၊ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ချမ်းသာအောင် လာဘ်စားပြီ ထောင်ထဲဝင်ဆိုလဲ ၁၅နှစ်ပေါ့။ သေဒဏ် အကြီးအကျယ် ပေးနေတဲ့ တရုတ်ပြည်တောင် လူလောဘ နိုင်ငံတော်အဆင့်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ၊ တပ်မတော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ သေဒဏ် တကယ်သတ်ပစ်တာ ခဏခဏ ပါပဲ။ ဒါလဲ လောဘကို မသတ်နိုင်ပါ။ ဥပဒေဘောင်ထဲက ငွေ-အာဏာ သုံးပြီး အဂတိလိုက်စားတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ရေအား၊ ကျောက်မီးသွေးအား လျှပ်စစ် ထုတ်ရင် အခု ကန့်ကွက်ခံရတဲ့ ၁၀၀၀ မဂါဝပ်၊ ၁၅၀၀ မဂါဝပ်၊ ၃၀၀၀ မဂါဝပ် .. အကြီးအကျယ် လုပ်စားမဲ့ ၀ိသမ တဖက်သတ် စာချုပ်များကို ဆက်မလုပ်ဖို့ ကန့်ကွက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြစ်ဆုံလိုမျိုး စနစ်တကျ လုပ်နိုင်ရင် နည်းပညာနဲ့ လူထုထောက်ခံမှု ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၀ိသမ၊ မတရားစာချုပ် နှစ်၅၀ လုပ်ပိုင်ခွင့်မှာ မြန်မာက ၁၀% ပဲ လျှပ်စစ်ရမယ် ဆိုတာမျိုးက အခု ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်း အထိ ၇.၅ဘီလျံ စီမံကိန်း တင်ပြနေတယ်။ စိတ်ပျက်စရာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စီးပွားအကြံပေး ရှောင်တန်နယ်က မေလ စင်ကာပူမှာ မြန်မာ့ စီးပွားလေး အလာအလာ ရှင်းလင်းပွဲ မှာ တရုတ်အကြွေးထဲ နစ်မဲ့ China Debt Trap စီမံကိန်းမို့ မလုပ်ဖို့ တင်ပြထားတယ် ဆိုပါတယ်။
မြန်မာတွေ ရေအား၊ ကျောက်မီးသွေးအား 1mW to 50mW အလတ်တန်းစား လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ကြပါလား။ ၃၃ကေဗီ၊ ၆၆ကေဗွီ၊ ၂၃၀ကေဗွီ၊ အခု ၅၀၀ဗို့ ကေဗွီ မဟာဓါတ်အားလိုင်းတွေ ဆွဲကြပါလား။ ဒါလောက် အလတ်စားလေးတွေ လုပ်ရင် ဘိလပ်မြေစက်ရုံမှာ ကျောက်မီးသွေးသုံးတာ မကန့်ကွက်သလို ဒေသခံတွေကို ကျေနပ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လဲ သူတို့ ကျေးရွာအတွက် ကျောင်းတခု သိန်း၁၀၀၊ ဆေးခန်းတခု သိန်း၅၀၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း တမိုင် ၁၀သိန်း ... ဆောက်ပေးလိုက်ပါလား။ နေရောင်ခြည်သုံး တနိုင်မီးထွန်းစက် တအိမ် ၂သောင်း နဲ့ အိမ်၅၀လောက်ကို ၁၀ သိန်းလောက် လှုဒါန်းပြလိုက်ပါလား။ အခုတော့ စူပရီမီ ရော၊ တိုတယ်ရော.. သူတိုကအကြံက ကန့်ကွက်ရင် လုံထိန်းရဲ ပိုက်ဆံပေးပြီး ခေါ်ထိန်းတဲ့ လက်ပတောင်းတောင် ဇတ်လမ်းကို လုပ်ချင်နေတဲ့ ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်။
အလတ်စား ရေအားလျှပ်စစ်တွေ၊ ကျောက်မီးသွေးလျှပ်စစ်တွေ အစိုးရပိုက်ဆံ မကုန်ပဲ လူထုအားနဲ့လုပ်ကြဖို့၊ အစိုးရက လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် တနင်္သာရီ ၊ မွန်၊ ကရင်၊ ရှမ်း ပြည်နယ်တွေမှ နယ်စပ်ကနေ မဟာဓါတ်အားလိုင်း ဆွဲခွင့် ပေးလိုက်ပါ။ ဒေသခံ များက သူတို့ဖာသာ PPP နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှတ်နှံမှု ရှာဖွေ မီးလင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ဓါတ်အားခလည်း ထိုင်းမှာလို နဲနဲပဲသုံးတဲ့ ဆင်းရဲသူကို တယူနစ် ၅၀၊ အဲကွန်းနဲ့ အများကြီးသုံးတဲ့ ချမ်းသာသူကို တယူနစ် ၁၅၀ စသဖြင့် လုပ်ပေးနိုင်မယ် လို့ မှော်ျလင့်ပါတယ်။
ရေအား လျှပ်စစ် အလတ်တန်းစားများ 1mW to 50mW လုပ်ဖို့ မြန်မာ့ လျှပ်စစ် ရေအားအရင်းအမြစ် ရဲ့ ၂၀၁၆ အစီရင်ခံစာ တင်ပြသူကို ခရက်တစ် ပေးပါတယ်။ အဲဒီ အချက်အလက်တွေကို အသုံးပြုကြပါ။ နောက်ထပ် အလတ်တန်းစာ ရေအားလျှပ်စစ် အရင်းအမြစ် များစွာလဲ ရှိတုန်းပါပဲ။ ရှာဖွေ အသုံးပြုကြပါလို့ တင်ပြလိုက်ရပါတယ် ချင်ဗျား။
ပုံ - Ministry of Electricity ,
Presentation of Myanmar Electricity 2016.
Download Link - https://goo.gl/xKXpYJ
ရည်ညွှန်း - ဇော်အောင်(မုံရွာ) ရေး ပြည်မြန်မာ မီးထိန်ထိန်သာဖို့အရေး လျပ်စစ်ကဏ္ဍ ဆောင်းပါးများကို မိုးမခက ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ http://moemaka.com/archives/63065
Critics Zaw Aung (monywa)